Four Seasons Hotels and Resorts announces three new properties | Hospitality Industry News
Ikhaya » Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe » Iihotele ezine zamaXesha amaNyaka kunye neeRhafu zibhengeza iipropathi ezintathu
Iihotele ezine zamaXesha amaNyaka kunye neeRhafu zibhengeza iipropathi ezintathu
Ihotele ezine neehotele namhlanje ibhengeze iipropathi ezintathu ngokuvulwa kweSan Francisco, iMadrid kunye neTokyo.
entsha Iihotele ezine zamaXesha eSan Francisco e-Embarcadero ivulwa ngokusesikweni ngo-Okthobha 1st. Le iya kuba yipropathi yesibini yohlobo lwayo esixekweni kwaye ibekwe kufutshane nendawo ye-Embarcadero kwiSithili sezeziMali, amanyathelo nje kude namashishini amakhulu amazwe aphesheya, indawo zokutyela ezinenkwenkwezi eMicrosoft, iivenkile zokunethezeka kwi-Union Square, nakwiindawo ezininzi ezihlala abantu abahambahambayo.
Ngoku vula ukusukela nge-25 kaSeptembath njengamaXesha oNyaka okuqala eSpain - Iihotele ezine zonyaka iMadridIfumaneka entliziyweni yekomkhulu elinombono omtsha wokutya ngokubhiyozelwa, umpheki waseSpain, uDani Garcia.
Iihotele ezine zamaXesha eTokyo eOtemachi ivulwe ngoSeptemba 1st kwaye ikwindawo yakudala yaseTokyo, amanyathelo nje okuya kwiNdlu yoBukhosi. Yonke into entsha, ehotele yanamhlanje ibonisa amaXesha amaXesha amane esixekweni.